DHIBAATADA KA TAAGAN DHISMAHA GOLAHA WASIIRADA
Rochesrer MN, USA
E mail abdirizaq88@hotmail.com
Dalalka duunka ayaa si aad ah ugu kala duwan qaab dhismeedka dowladahooda iyadoo wadamada badankooda uu ka jiro sharci qeexaya inta wasaaradood ee uu wadankaasi yeelanayo. Waxaa mararka qaarkood dhacda in la abuuro hay'ad cusub amaba la baabi'iyo mid horay u jirtay, taasi oo loo maro in isbedel lagu sameeyo dastuurka amabase sharciga kale ee arintaa khuseeya.
Wadankeena Soomaaliya, oo ay iska gaabantahay taariikhdiisa dowladnimo, ayaa waxaa markastaba ka jiray jaahwareer ku saabsan tirada wasaaradaha loo baahanyahay. Dowladii wadanka xukumaysay mudadii ugu dheerayd ee Maxamed Siyad Bare, ayaa ka dhigtay wax iska caadi ah in hadba la magacaabo wasaarado cusub oo aan horay loo maqal.
Mudadii ay wadanka ka jireen dagaalda sokeeye, waxaa la dhisay dowlado aan la isku raacsanayn oo midkastaba lahayd wasiiro iyo ku xigeeno xad dhaaf ah. Sababta keentay in sidaa loo badiyo ayaa lagu tilmaamay in lagu qancinayay dad badan oo la doonayay in ay dowlada taageeraan oo hadii aanay jagooyin helin noqon lahaa mucaaradka ugu horeeya ee uu maamuladaasi.
Dowlada dhawaan ka dhalatay shirweynihii Kenya ee uu madaxweynaha ka yahay C/llaahi Yusuf, ayaanu jirin qodob sharci ah oo u xadidaya inta wasaaradood ee uu qaranku yeelanayo. Ra'isulwasaaraha cusub, Cali Maxamed Geedi, ayaa waxaa ku hareeraysan dad boqolaal gaaraya oo buntukhyo u haysta in ay dowlada la dagaalamaan hadii aan laga dhigin wasiiro. Badankoodu waxay aaminsanyihiin in ay yihiin kuwa kaliya ee xaqa u leh jagooyinkaasi.
In badan oo ka mid ah dadka jagooyin doonka ah, ayaa waxaa dhiiragalinaysa Madaxweynanimada C/llaahi Yuusuf oo ka mid ahaa madaxdii mudada badan soo hogaaminaysay jabhadaha hubaysan ee ku dagaalamayay magaca qabiilka. Taasi waxay meesha ka saaraysaa in nina lagu riixo in uu ka soo qayb qaatay dagaaladii sokeeye iyadoo ay hogaamiye kooxeedyada badankoodu u arkaan wax aan u cuntami karin in ay meel cidla ah uga tagaan halgankii dheeraa ee madaxtinimo doonka ahaa ee ay soo mareen.
Cali Maxamed Geedi oo uu C/llaahi Yuusuf oo doonaya in uu gadaal wax ka maamulo iskaga jeeday indhihii dadka, ayaa waxaa laga sugayaa in uu soo dhiso dawlad ugu yaraan qancisa inta qoryaha isku sidata. Dad badan oo aqoonyahano ah ayaa waxay aaminsanyihiin in aanay Soomaaliya u baahnayn wax ka badan 13 wasaaradood. Taasi waa mid aan u cuntamayn ragga isku bixiyay halgamayaasha. Waxaa ay arintu u muuqataa in uu ra'isulwasaaruhu marka hore qaadan doono warqad iyo qalin oo uu qori doono inta qof ee uu ku khasbanyahay in uu wasiiro u magacaabo. Talaabada labaad ayaa noqonaysa in uu sameeyo wasaarado farabadan oo uu ku aamusiyo kuwa hamuunta weyn u qaba in ay mar un helaan xafiis qancin kara iyaga iyo taageerayaashii naf iyo maalba u soo huray.
Abuurista wasaarado dad lagu qanciyo ayaan marnaba waxtar u yeelan doonin shacab weynaha soomaaliyeed . Dhanka kalena, wasaaradaha muhiimka ah ee halbowlaha u ah adeega umad weynta soomaaliyeed, ayaa iyaguna hankii loo qabay hoos u dhacayaa hadii aanay xilkooda qaban dad wadaniyiin ah oo ay umadu u simantahay.
Ugu danbayntii, Ra'isulwasaaraha ayaan laga sugayn in uu wasiiro magaacaabo oo kaliya, balse waxaa intaa u dheer isku jaangoynta tirada wasaaradaha, qancinta dadka jago doonka ah iyo xulida dad aqoon leh oo socodsiinkara maamul dowladeed.